Ukufakwa kwe-Portland neSixeko saseSalt Lake: FSX, FSX: SE okanye i-P3D4?
umbuzo Ukufakwa kwe-Portland neSixeko saseSalt Lake: FSX, FSX: SE okanye i-P3D4?
iinyanga 4 4 kwiiveki ezidlulileyo #1352 by Gero-1954
Ekuqaleni kofakelo: ndingathini ukuba ndigqibe ukugqiba ukufaka kwiFSX, FSX: SE okanye i-P3D4?
Ndinezo zintathu ze simulators, kodwa ukusuka kubukhulu obukhulu befayili yokukhuphela, kubonakala kum ngathi indawo eyokwazi ukuyenza kuphela ngeP3D4, kwaye ngoko ke ndifuna kuphela ukufakwa kwe-P3D4.
iinyanga 4 4 kwiiveki ezidlulileyo #1353 by captainblock
I-FSX iyakwazi ukuphatha ngokutya, ndifake ezininzi ezininzi ngaphambili. Khetha nje nayiphi na imimiselo ofuna ukuba indawo ifakwe kuyo, elula njengaleyo.
iinyanga 4 4 kwiiveki ezidlulileyo #1355 by Dariussssss
Kukho enye inketho, I-app efakekayo yefowuni. Ndine-FSX, kodwa ndiqinisekile ukuba isebenza nge-P3D ngokunjalo. Isixhobo esikhulu.
iinyanga 4 4 kwiiveki ezidlulileyo #1358 by Gero-1954
usebenzisa (intsha?) i-installer 11.1, andinayo inketho apho simulator ukuyifaka khona. Ndiyakwazi ukhethe kuphela phakathi kokufakwa "okuzenzekelayo" kunye "nokuchaneka" ukufakwa. Ndihlala ndizama okwesibini ngethemba lokundivumela ukuba ndigqibe apho ndingayifaka khona, kodwa kulo mzekelo kuphela umzila we-FSX, ayikho i-FSX: SE kwaye ayikho i-P3D4.
Mhlawumbi ndizama enye into. Noko ke, mbulela impendulo yakho. Gero
iinyanga 3 4 kwiiveki ezidlulileyo #1372 by rikoooo
Kumele ukhethe ukufakela "ngokuzenzekelayo" uze ukhethe umzulisi wakho oluhlu, ukuba umzulisi wakho ungaboniswa ngoko kuthetha ukuba ukusetha kwakho simulator akuchanekanga. I-installer isoloko ibheka kwiRejista yakho ngencoko equlethe indlela epheleleyo ye simulator yakho, ukuba isitshixo asikhoyo okanye ngaba umfanisi awufakekanga okanye unokusetyenzwa okubi.
iinyanga 3 2 kwiiveki ezidlulileyo #1373 by Gero-1954
Ndiyabulela - impendulo yokugqibela yayingu-EXACTLY ukuba ndilindele. Kusebenza, isigqibo esimele sisetyenziswe simulator siza emva kweyodwa ngokuzenzekelayo.
Ixesha ukwenza page: 0.408 imizuzwana